Nhau - Zvitsitsinho zvakakwirira zvinogona kusunungura vakadzi! Louboutin anobata oga kutarisisa muParis
Zvitsitsinho zvakakwirira zvinogona kusunungura vakadzi! Louboutin anobata oga kutarisisa muParis
French anoshamisira mugadziri weshangu Christian Louboutin's 30-gore rebasa retrospective "The Exhibitionist" yakavhurwa kuPalais de la Porte Dorée (Palais de la Porte Dorée) muParis, France. Nguva yekuratidzira iri kubva muna Kukadzi 25 kusvika Chikunguru 26.
"Zvitsitsinho zvakakwirira zvinogona kusunungura vakadzi"
Kunyangwe hazvo zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvakaita saDior inotungamirwa nemugadziri wechikadzi Maria Grazia Chiuri asisiri kufarira shangu dzakakwirira, uye vamwe vakadzi vanofunga kuti zvitsitsinho zvakakwirira kuratidzwa kwehuranda hwepabonde, Christian Louboutin anosimbirira kuti kupfeka zvitsitsinho ndeRudzi urwu rwe "fomu yemahara", zvitsitsinho zvakakwirira zvinogona kusunungura vakadzi, kubvumira vakadzi kuti vataure ivo pachavo uye kuputsa izvo zvakajairwa.
Pamberi pekuvhurwa kwechiratidziro chemunhu oga, akadaro mukubvunzana neAgence France-Presse: "Vakadzi havadi kurega kupfeka shangu dzakakwirira." Akanongedzera kubhutu rereti refu refu-refu retsvimbo inonzi Corset d'amour ndokuti: “Vanhu vanozvifananidza uye nenyaya dzavo. Yakabudiswa mushangu dzangu. ”
Christian Louboutin anogadzirawo bhutsu neshangu dzakatsetseka, asi anobvuma kuti: “Ini handifunge kunyaradzwa kana ndichigadzira. Hapana bhutsu dzakakwirira gumi nemaviri masendimita dzakagadzikana… asi vanhu havauye kwandiri kuzotenga ma slippers. ”
Izvi hazvireve kupfeka shangu dzakakwirira nguva dzose, akati: “Kana muchida, vakadzi vane rusununguko rwekunakidzwa nehukadzi. Kana iwe uchigona kuve nezvitsitsinho zvakakwirira uye shangu dzakapetana panguva imwe chete, sei uchisiya zvitsitsinho? Handidi kuti vanhu vanditarise. 'S shangu dzakati:' Vanoratidzika kunge vakasununguka chaizvo! ' Ndinovimba vanhu vachati, 'Wow, ivo vakanaka kwazvo!'
Akataura zvakare kuti kunyangwe vakadzi vachigona kungofamba-famba muzvitsitsinho zvake, hachisi chinhu chakaipa. Akataura kuti kana bhutsu dzichigona "kukumisa kumhanya", zvakare chiri "chinhu chakanaka" chaizvo.
Dzokera kunzvimbo yeunyanzvi kuvhenekerwa kubata chiratidziro
Chiratidziro ichi chinoratidza chikamu chemuunganidzwa waChristian Louboutin uye mamwe akakweretwa mabasa kubva kuunganidzwa veruzhinji, pamwe neshangu dzake dzinozivikanwa dzvuku-dzakatsetseka. Kune akawanda marudzi eshangu anoshanda anoratidzwa, mamwe acho asina kumbobvira akaitwa pachena. Chiratidziro ichi chichajekesa kumwe kwekubatana kwake kwakasarudzika, senge girazi rakasviba pamwe nekubatana naMaison du Vitrail, Seville -style sirivha sedan crafts, pamwe nekubatana nemukurumbira director uye mutori wemifananidzo David Lynch uye New Zealand multimedia muimbi Chirongwa chekubatana pakati paLisa Reihana, Britain mugadziri Whitaker Malem, Spanish choreographer Blanca Li, uye Pakistani muimbi Imran Qureshi.
Hazvina kuitika kuti chiratidziro paGilded Gate Palace inzvimbo yakakosha yeChristian Louboutin. Akakurira mu12th arrondissement yeParis padhuze neGilded Gate Palace. Ichi chivakwa chakashongedzwa zvakamushamisa chakamufadza uye chakava chimwe chezviedza zvake zveunyanzvi. Idzo shangu dzeMaquereau dzakagadzirwa naChristian Louboutin dzakafemerwa neinopisa mvura yegungwa yeGilded Gate Palace (pamusoro).
Christian Louboutin akaburitsa pachena kuti kufarira kwake zvitsitsinho zvakakwirira akatanga aine makore gumi, paakaona chikwangwani che "No High Heels" kuGilded Gate Palace muParis. Akafemerwa neizvi, akazo gadzira zvekare shangu dzePigalle. Iye akati: “Imhaka yechiratidzo ichocho yandakatanga kuvadhirowa. Ndinofunga kuti hazvina zvazvinobatsira kurambidza kupfeka shangu dzakakwirira… Kune mamwe madimikira ekuti zvakavanzika uye zvechihure ...
Akazvipira zvakare kubatanidza shangu nemakumbo, kugadzira shangu dzakakodzera toni dzakasiyana siyana uye makumbo marefu, achivadaidza kuti "Les Nudes" (Les Nudes). Shangu dzaChristian Louboutin dzave kuve nemifananidzo, uye zita rake rave kufananidzwa neumbozha uye zvepabonde, zvichionekwa munziyo dzerap, mafirimu nemabhuku. Akadada akati: "Pop tsika haidzorwe, uye ndinofara nazvo."
Christian Louboutin akaberekerwa muParis, France mu1963. Anga achidhirowa masiketi eshangu kubva paudiki. Pazera remakore gumi nemaviri, akashanda semudzidzi muFolies Bergère konzati horo. Pfungwa panguva iyoyo yaive yekugadzira shangu dzekutamba dzevasikana vaitamba pachikuva. Muna 1982, Louboutin akabatana nemuFrench mugadziri weshangu Charles Jourdan pasi pekurudziro yaHelene de Mortemart, director wekusika weiyo panguva iyoyo Christian Dior, kushandira iro zita rezita. Gare gare, akashanda semubatsiri kuna Roger Vivier, muvambi we "shangu dzakakwirira", uye akateedzana akashanda saChanel, Yves Saint Laurent, shangu dzeVakadzi dzakagadzirwa nemhando dzakadai saMaud Frizon.
Muma1990, Princess Caroline weMonaco (Princess Caroline weMonaco) akadanana nebasa rake rekutanga, iro rakaita Christian Louboutin zita remhuri. Christian Louboutin, anozivikanwa neshangu yake tsvuku-nyoro, akagadzira zvitsitsinho zvakakwirirazve kuwana mukurumbira muma1990 uye kutenderedza 2000.